वर्गभेदी बजेटको सुटकेश बहिष्कार गरौं,गरीब र मजदूर को लागि बजेट कहिले आउछ गणतन्त्रमा?::Nepal's Online News Portal
वर्गभेदी बजेटको सुटकेश बहिष्कार गरौं,गरीब र मजदूर को लागि बजेट कहिले आउछ गणतन्त्रमा?
-✍️ डायमण्ड अधिकारी "बिद्रोही"
बुध, जेष्ठ १५, २०७६
✍️ डायमण्ड अधिकारी “बिद्रोही”
आज बिहानै देखी देश मा मज़दूरि गरीखाने जनता को आकाशमा कालो बादल लागेको छ। बिचौलिया र कालाबजारी अनि निजामती कर्मचारी सुरक्षाकर्मी पार्टी मनाउन उत्सुक छन। किनकी आज देश मा जागीरे हुनेखाने को पैसा बढ़ने दिन। या भनु राजनिती मा बचेको र ऋण नै गरेरै भने पनि चेतनशील सीमित बर्ग लाई राज्य सम्पति निस्फिकरि बाडने साइत गरिएको दिन हो।
बजेट विनियोजन समग्र मा जागीरे र सरकारी मातहत का कर्मचारी लाई मात्र नभई मजदूर विपन्न पिछडीएका जनता लाई पनि हुनुपर्ने होइन र? की गरीब र मजदूर नेपाली नागरिक होइनन? किन उपेक्षा हुन्छ निम्न बर्ग लाई। बर्गीय क्रांति र आर्थिक समानता को बटमलाइन बोकेको शक्ति को राज्य मा यती ठुलो बिभेद किन? राज्य को जागीर राज्य को लागि गुन गरेका होइनन कसैले आफ्नो बाध्यता ले खाएका हुन। कसैलाई बजेट मा पैसा न बढाएको मा आपत्ति छ भने सबलाई बर्खास्त ग़री जापान यूरोप अस्ट्रेलिया र कोरिया गएका युबा फर्काएर भिजनवाला युबा नियुक्ति गर। डिग्री लिएर अरब र यूरोप अस्ट्रेलिया जापान को भूमि मा जोतिने युबा तिमिहरुजस्ता धेरै क्रिएटिव छन। देश मा गृहयुद्ध महाभारत भो ज्ञानरेन्द्र लाई सत्ताच्युत ग़री दुर्योधन साबित गरियो युधिष्ठिर को शासन शुरूभएको भ्रम फैलाइयो खै त जनता ले अनुभूति गरेको? झन हजार छोटे राजा हरू निस्किए। राजनीतिक दलहरु लगाम नभएको घोड़ा जस्ता भए। मत्त उन्माद र पागल राज्य चलाउन उद्यत यो घृणित राजनीति कहिले सम्म? राज्य ले जनतामा दिने सामाजिक न्याय र अर्थ सहयोग गरीब जनता को दैलो सम्म पुग्ने कहिले सम्म? बजेट ले कर्मचारी खुसी पार्न होइन जनता खुसी पार्ने योजना दिने कहिले? बिनाधितो ऋण, बैदेशिक रोज़गारी बाट फर्किएका लाई सहूलियत ऋण, उद्यम ऋण, शैच्छिक प्रमाण पत्र राखेर दिने ऋण खोई त सरकार? बजेट मा पूर्ब पच्छिम रेल चाहिएको छैन कालिकोट र कर्णाली मा सिटामोल पुराइदेउ। चंद्रमा मा रकेट चाहिएको छैन देश मा मिचिएको सीमा मा पर्खाल लगाइदेउ। जनता ले एक छाक खाएर पर्खाल लगाउछन त्यति हिम्मत गर्ने रास्ट्रबादि छ कोही देश मा? के देशको बजेट एक लाख पाँच हजार सैनिक चौरासी हजार निजामती सेवा का कर्मचारी 61हजार प्रहरी को लागि मात्र हो पौने तीन करोड़ जनता ले बाचने कसले दिएर हो? सरकार को दायित्त्व बोलेर जनता लाई कर थुपोर्दै जनता लाई यातना दिने क़ानूनं बनाउने मात्र हो? बर्ग भेदी राजनिती लाई उत्तानो पार्न पौने3करोड़ जनता ले हतियार उठाउन पर्ने दिन आएकै हो र?
बिभिन्न युग हरु पार गरे जनता ले। भोको पेट मा पटुकी कसेर आन्दोलन र बलिदान दिए बिभिन्न तन्त्र ढालने र स्थापित गरे। सर्बहरा बर्ग मुक्ति को सपना देखेर आफ्नो आधापेट खाने आमाशय मा पेट भरी दुइ छाक खाने सपना देखेका जनता ले मुकुण्डों धारी राज्य संचालक र सामन्ती बर्ग लाई पहिचान गर्न सकेनन। भेष बदलिएका तिनै शासक शोषण को वितण्डा फ़रक गर्दै जनता लाई आज पनि बर्गीय मुक्ति समानता र सम्ब्रिद्दी को सपना मा भुलाई रहन सफल भएका छन। सदैब झै आज पनि देश को संघीय संसद बाट बजेट भाषण हुदै छ। देश मा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य ले आकास छूने छ। ठेला धकेलने मजदूर को रोटी खाने पिठो को मूल्य बढ़ने छ। गरीबी को पीड़ा टहलन मजदूर ले खाने चुरोट को मूल्य आकास हुन्छ। तेल नुन चीनी अन्य कति कति। बजार मा बजेट भाषण पछि अबश्य बढछ भनेर कृतिम अभाब ग़री राखिएका समान हरू भोली बाट उच्च मूल्य मा बिक्री हुन्छन। ति समान खरीद गर्ने सरकारी जागीरेको महंगी भत्ता तलब पनि बढछ उसलाई जिबनयापन गर्न कुनै समस्या नै हुदैन। तर मजदूर भारी बोकने लाई कसले हेरछन उनीहरु को भोट राज्य ले लिन्छ तर राज्य ले बेरोजगार लाई के दिन्छ? घन पीटने ज्यामि को फलाम बढछ तर उसैको श्रम किन बढ्दैन?? भारी बोक्ने भरिया ले रोटी को पैसा बढ़ी तिर्छ तर उसको मज़दूरिको मूल्य खोई सरकार?? जनता केबल निजामती कर्मचारी मात्र हुन? गरीब को भोट ले आज राज्य को ढुकुटि मा मनपर्दी गर्ने स्थान मा पुगेर मजदूर जनता को लागि के भाषण गर्नु हुन्छ? महँगी र कालाबजारी लाई मालामाल बनाउने र मजदूर गरीब जनता को ढाड सेकिने राष्ट्रघाती बजेट कति बर्ष बोकाउने हो जनता लाई ए राष्ट्र का नाइके हो?
आज शहर र गाउ का भट्टी मा बियर र रक्सी पार्टी हुने छ फुपु को श्राध्द ग़री खाएको अबूतालि केहि लाख राज्य का भरौटे ले पाउने कालो दिन हो । गणतंत्र को दिन माँ जनता सेकिने बजेट को नाम मा लूट को बन्द सूटकेस भित्र गरीब को पशिना को गन्ध थाहा पाउने अर्थ मन्त्री कहिले पाउला देश ले यही परखाईमा एक बेरोजगार नागरिक म।
विचार बाट अन्य
पर्सामा भिषण हावा हुरी ! केहि मानिस घाइते, दर्जनौं घरमा क्षति
२५ जेठ, वीरगञ्ज । शनिबार साँझ बर्षासँगै आएको हावाहुरीले पर्सामा दर्जनौं घरमा क्षति पुगेको छ । केहि मानिस घाइते भएका छन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण प्रसाद भट्टराईले हावाहुरीले क्षति पु¥याएको र विवरण...
गोविन्दराज जोशीको मुद्दा ! अख्तियारकै हेलचेक्र्याइँ-कारबाही गर्ने सर्वोच्चको चेतावनी
२३ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका नेता गोविन्दराज जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै असहयोग गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएको छ । जोशीविरुद्धको भ्रष्टाचार तथा अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दाको सक्कल मिसिल ५...
आखिर कसरि चम्किन्छ भाग्य ? किन टिक्दैन तपाईको हातमा पैसा ? हेर्नुहोस अघोर बाबाको उत्तर (भिडियो सहित)
पछिल्लो समय मानिस भित्र भित्रै विचालित छन् अनि मन अशान्ति छ । अनेक किसिमको प्रतिस्पर्धा र दौडले मानिस आफैमा थकित बनिरहेको छ । कोही मानिस भाग्यमा विश्वास गर्छन्, कोही कर्ममा तर कत्तिको भने हातमा...
प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमल चौलागाई र उत्तर कोरिया राजदुत झो योङ्ग वाङले गरे जमुनाद्वारा लिखित पुस्तक ‘बदलिएको मोड’ बिमोचन
काठमाडौं । प्रमुख अतिथि पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य कमल चौलागाई र विशेष अतिथि नेपालका लागि उत्तर कोरिया राजदुत झो योङ्ग वाङले लेखक जमुना खत्रीद्वारा लिखित पुस्तक ‘बदलिएको मोड’ हिजो मंगलबार विमोचन भएको छ...
टन्सिल रोग होइन । जनमानसमा घाँटी दुख्नेबित्तिकै टन्सिल भयो भन्ने धारणा छ, जुन गलत हो । घाँटी दुख्नुका अनेक कारण हुन्छन् । टन्सिल भनेको शरीरको कलेक्सन अफ लिम्फोर टिस्यु हो, जसमा शरीरले उत्पादन गर्ने तत्वहरु...
बलिउड अभिनेता सलमान खानले हरेक वर्षको इदमा आफ्ना प्रशंसकलाई विशेष उपहार स्वरुप आफ्नो फिल्म रिलिज गर्छन् । हरेक इद सलमान खानका लागि निकै विशेष हुन्छ । सन् २००९ मा वान्टेडदेखि सन् २०१९ मा भारतसम्म...